Waxsansheeg News - Codsiga Dib u Eegida Latex Powder
Isticmaalka budada dib-u-faafin kara
Budada cinjirka ah ee dib loodaadin karo waxaa badanaa loo adeegsadaa goobaha dhismaha sida dahaarka derbiga dibedda, isku xirka dusha sare, iskudhafka isku xidhka, isku xidhka gypsum, stucco gypsum, dhismaha gudaha iyo dibedda qashinka, madaafiic qurxin, iwm, oo leh codsi aad u ballaadhan iyo suuq wanaagsan rajada.
Waqtigaan la joogo adduunka si ballaaran loo isticmaalo ee budada polymerylka ah waa: Vinyl Acetate Polyvinyl Acetate (VAC / E), Terpolymer of Ethylene, Vinyl Chloride and Vinyl Laurate (E / VC / VL), Vinyl Acetate Ester iyo ethylene iyo asiidh dufan sare leh vinyl ester ternary budada caagga ah ee loo yaqaan 'copolymer budada' (VAC / E / VeoVa), seddexdan nooc ee budada polymer-ka ah ee dib loo soo celin karo ayaa ka taliya suuqa, gaar ahaan vinyl acetate iyo ethylene copolymer budada caagga ah VAC / E, Waxay leedahay booska hoggaamineed ee aagagga caalamiga ah, waxayna u taagan tahay astaamaha farsamo ee la arki karo budada. Laga soo bilaabo waaya-aragnimada farsamo ee adeegsiga polymers-ka-modified roodhiska, wali waa xalka ugu fiican ee farsamada:
1. Waa mid ka mid ah kuwa ugu isticmaalka badan adduunka;
2. Khibradda ugu badan ee arjiga laga helo goobta dhismaha;
3. Waxay la jaan qaadi kartaa astaamaha cilmiga diimeed ee ay u baahan yihiin hoobiyeyaasha (taasi waa, shaqada loo baahan yahay);
4. cusbi Polymeric leh monomers kale wuxuu leeyahay astaamaha walxaha isbadalaya ee dabiiciga ah (VOC) iyo gaaska cuncunka yar;
5. Waxay leedahay astaamaha u-adkaysiga UV ee wanaagsan, iska caabbinta kuleylka wanaagsan iyo xasilloonida muddada-dheer;
6, adkaysi sare u saarin;
7, wuxuu leeyahay cabbirka heerkulka kala guurka ugu balaaran ee galaaska (Tg);
8. Waxay leedahay isku xirnaan buuxda oo dhameystiran, dabacsanaan iyo sifooyin farsamo;
9. Waxay leedahay waayo-aragnimadii ugu dheerayd ee soosaarka kiimikada iyo sida loo ilaaliyo xasiloonida keydinta soosaarka alaab tayo leh oo xasilloon;
10.Waa fududahay in laysku daro midabka difaaca jirka (polyvinyl alcohol) ee waxqabadka
Jaantus 1 waa sawirka budada dib loo arki karo ee lagu iibiyay suuqa
Astaamaha budada dib loo ridi karo
1. Budada dib loo ridi karo waa budo biyo-ku milmi karaya. Waa copolymer of ethylene iyo vinyl acetate, oo leh aalkolada polyvinyl oo loo yaqaan 'colloid colloid'.
2. Budada 'VAE' ee dib loo dareemi karo waxay leedahay hanti filim samaynaysa, 50% xalka aqueous wuxuu sameeyaa emulsion, wuxuuna sameeyaa filim u eg caag ah ka dib marka la dhigo galaaska 24 saacadood.
3. Filimka la sameeyay wuxuu leeyahay dabacsanaan gaar ah iyo iska caabin biyaha. Gaari karaa heerarka qaranka.
Budada latex 4.Redispersible waxay leedahay waxqabad sare: waxay leedahay awood isku xirnaan sare iyo wax qabad gaar ah, iska caabin adag oo dhanka biyaha ah, xoojinta isku xirnaanta wanaagsan, waxayna siisaa madaafiicda alkali aad u fiican, taas oo hagaajin karta isku haynta madaafiicda iyo awooda dabacsanaanta ka sokow caagnimada, xiro iska caabin. iyo shaqaynta, waxay leedahay dabacsanaan xoogan oo hoobiye ah oo u adkaysi u leh hoobiye.
Codsiga budada cinjirka ah ee lakafirsan karo madaafiicda budada qalalan:
Mort madaafiicda madaafiicda iyo madaafiicda: Foomka dib-u-warshadaynta ee loo yaqaan 'alexstable budada' waxay leeyihiin awood-darro, biyo-hayn iyo iska caabin qabow, iyo xoog isku-xidh, oo si wax-ku-ool ah u xallin kara burburka iyo qulqulka ka jira madaafiicda qadiimiga ah. Iyo arrimo kale oo tayo leh.
Mort Ismiidaaminta madaafiic iyo walxo sagxad ah: Budada cinjirka ah ee 'Redispersible latex' waxay leedahay awood sare, isku xirnaan wanaagsan, isku dheelitirnaan iyo dabacsanaan loo baahan yahay. Waxay hagaajin kartaa adhesion, iska caabinta xoqida iyo haynta biyaha ee qalabka. Waxay keeni kartaa hadal-celin heer sare ah, shaqeynta iyo waxqabadka is-nadiifinta ee ugu wanaagsan dabaqa is-le'eg isbarbar dhigga iyo qashinka.
Ad Koolada dhogorta leh, wakiilka isku duubida foornada: Budada cinjirka ah ee 'Redispersible latex' waxay leedahay dhejis wanaagsan, haynta biyaha oo wanaagsan, waqti furan oo furan, dabacsanaan, caabbinta sag iyo caabbinta barafowga-dhalaalka wanaagsan. Waxay u keeni kartaa isku dhejin dhaadheer, iska caabin sarreysa iyo waxqabadka wanaagsan ee guluubka taayirrada leh, xarkaha xajiinka ah ee lakabka khafiifka ah iyo garka isku-darka.
Mort Dhoob biyuhu biyuhu ka samaysan yihiin: Budada dib-u-warshadaynta ee loo yaqaan 'alekser budada' ah ayaa kor u qaadda awoodda isku xidhka dhammaan weerrarka, waxay yareysaa qaab dhismeedka laastikada ah, waxay kordhisaa haynta biyaha, waxay yareyneysaa kuleylka biyaha, waxayna soo saartaa alaabada leh dabacsanaan sare, iska caabbinta cimilada sare iyo shuruudaha adkeysiga biyaha sare. Waxay leedahay saameynta muddada dheer ee nidaamka xidhashada oo leh shuruudaha dib ucelinta biyaha iyo adkeysiga biyaha.
Mort Madaafiic dahaarka gidaarka dibedda: Budada emulsion ee dib-u-soo-celin kara nidaamka dib-u-habeynta bannaanka ee dibedda waxay sare u qaadaysaa isku-xirnaanta madaafiicda iyo xoogga ku-xirnaanta guddiga dahaadhka, si aad u raadsato ningax adoo yaraynaya isticmaalka tamarta. Si aad u gaadho ku shaqaysiga lagama maarmaanka ah, xoogga dabacsanaanta iyo dabacsanaanta alaabada xaydha derbiga bannaanka, waxaad ka dhigi kartaa alaabooyinkaaga madaafiicda inay leeyihiin wax-qabad wanaagsan oo taxane ah oo ay ka kooban yihiin agabyada is-gaadhsiinta iyo salka. Isla mar ahaantaana, waxay sidoo kale ka caawineysaa hagaajinta caabbinta saameynta iyo iska caabbinta dusha sare.
Dayactirka Madaafiicda: Budada cinjirka ah ee dib loodaadin karo waxay leedahay dabacsanaanta loo baahan yahay, hoos udhaca, isku-xirnaanta sare, ku habboon dabacsanaanta iyo jiibta. Samee madaafiic dayactir ah oo buuxisa shuruudaha kor ku xusan ee dayactirka shubka qaabdhismeedka iyo qaabdhismeedka.
Mo Interface Mortar: Budada dib-u-warshadaynta ee loo yaqaan 'latexpersible' budada jilicsan ayaa badanaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo dusha sare ee la taaban karo, la taaban karo, biro lime ciid ah iyo duul ash ash, iwm, si loo xalliyo dhibaatada ah in interfaceku aanu fududahay in la dhejiyo sababtoo ah nuugista biyaha xad-dhaafka ah ama jilicsanaanta. , iyo lakabka malaaska ayaa madhan. Drum, dildilaaca, xoqidda, iwm. Waxay ka dhigeysaa adhesion-ka mid sii xoog badan, ma fududa in uu dhaco iyo iska caabbinta biyaha, iyo iska caabbinta barafowga-dhalaalida. Waxay ku leedahay saameyn weyn howlgalka fudud, dhismaha ku habboon.
Budada dib loo isticmaali karo waxaa badanaa lagu isticmaalaa:
Budada gudaha iyo gudaha ee budada ah, xarkaha dhoobada, wakiilka isku xirka dhoobada, wakiilka iskuxirka budada qalalan, hoobiye dahaarka derbiga dibedda, hoobiye is-dheellitiran, madaafiic dayactir ah, hoobiye lagu qurxiyo, hoobiyeyaal aan biyuhu ka madhnayn oo ku dahaadhan kuleyliyaha kuleylka ah ee qallalan oo isku qasan. Dhammaan madaafiicda waxaa loo isticmaalaa in lagu hagaajiyo burburka iyo qaab dhismeedka sare ee jilicsan ee madaafiicda sibidhka, iyo in la siiyo dabacsanaan ka fiican iyo xoogsiga gantaal culus si ay uga hortagaan ugana daahaan jiilka burburka ku dhaca madaafiicda sibidhka. Sababtoo ah polymerka iyo madaafiicdu waxay sameysmayaan qaab dhismeed iskuxir ah oo shabakad wadaag ah, filim polymer joogto ah ayaa laga sameeyaa daloolada, kaas oo xoojiya isku xirnaanta udhaxeysa iskudhafka iskuna celiya qaar ka mid ah daloolada ku jira hoobada. Sidaa darteed, hoobiyaha wax laga beddelay kadib markii uu adkaaday wuxuu leeyahay waxqabad ka wanaagsan hoobiye sibidhka. Horumar weyn ayaa la sameeyay.
Waqtiga boostada: Mar-18-2018